12 Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > 12 Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, Tareen Safarka USA, safarka Europe
Hal abuur, fursadaha dhaqaale, maskax hal abuur leh, iyo gaadhista suuqa ugu fiican ayaa ah sifooyinka ugu sarreeya ee xarun bilawga ah oo kobcaysa. Kuwani 12 xarumaha bilowga ah ee adduunka oo dhan waxay soo jiitaan maskaxda ugu tayada badan si ay u dhistaan ​​oo u quudiyaan fikradahooda waaweyn, Kooxaha IT, iyo isku xirka si ay horay ugu riixaan bilawga cajiibka ah. Laga soo bilaabo Shanghai ilaa Berlin, Nidaamyada deegaanka ee bilowga ah ee ugu sarreeya ayaa ah kuwa ugu xooggan adduunka.
1. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Barcelona
Caan ka ah aasaasayaasha ajaanibka ah, Barcelona, waa mid ka mid ah xarumaha bilowga ah ee ugu kala duwan adduunka. marka hore, Barcelona ayaa bixisa qiimaha ugu fiican ee lacagta, xagga kirada boosaska xafiiska, goobta isku xirka, xeerar, iyo kobaca maalgashiga. Marka labaad, Barcelona waxay leedahay tirada ugu badan ee aasaasayaasha farsamada, xataa in ka badan Tel-Aviv. Marka saddexaad, ka mid ah xarumaha ugu badan ee Yurub, Barcelona waa wax walba oo ku saabsan in hab la siiyo haweenka aasaasay, horumarinta, and digital professionals.
Dhammaan kuwa kor ku xusan waxa ay kaalinta koowaad kaga jiraan Barcelona 5 xarumaha bilowga ah ee adduunka oo dhan, and the 7th fastest-growing tech community in Europe.
Bilowga Ballanqaadka ah ee Barcelona:
x1 Dabayl, Aminitiz, Caafimaadka Kooa.
Sida mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan Yurub, Moscow waxay leedahay dhaqaale ballaaran, iyo dhul bacrin ah oo maskax weyni isugu timaado. Waxaa intaa dheer, Moscow waa magaalo guud, soo jiidasho leh, xiiso leh, dhallinyarada, isla heerkii London iyo Paris.
Sidaas, Moscow waxay soo jiidataa dhalinyaro badan oo ganacsi oo ka kala yimid adduunka oo dhan, si ay uga shaqeeyaan isku-darka ciidamada iyo kartida maxaliga ah ee meelaha sii kordhaya ee wada shaqaynta ee magaalada. Sayidka, tirada ugu badan ee bilawga ah ee bilawga ah ee Moscow ayaa gaadhay wax cajiib ah 1900.
3. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Paris
Meelo wada shaqayneed oo wanaagsan, xeerarka la hagaajiyay, fursadaha dhaqaale, iyo incubators cajiib ah, Paris waa xarun ganacsi oo kor u kacday oo ku taal Yurub. Halka ay magaaladu tahay caasimad caan ku ah moodada, waxa ay u noqotay hab-nololeed aad u wanaagsan kuwa bilawga ah.
This immense rise is thanks to the world-renowned universities, gaar ahaan kuliyadaha injineernimada iyo kuwa aqoonta sare leh. Intaa waxaa dheer, the network of incubators like Silicon Sentier and its famous La Cantine co-working space. Faa'iidooyinkaas oo kale, Paris ayaa ugu sareysa xarumaha tignoolajiyada ee Yurub.
Casri ah, bey'ada saaxiibtinimo, magnet u ah ajaanibka, Singapore is one of the magaalooyinka ugu fiican to live in and launch your own startup. Waxaa intaa dheer, Singabuur waxa ay ganacsato badan u aqoonsadeen inay tahay meesha ugu fiican Aasiya ee lagu kobcin karo ganacsigaaga, iyada oo Hong Kong dhinac ka riixaysa tartanka.
5. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Berlin
Gudaha 2016 magaalada xisbiga ee Yurub ayaa ku guuleystay Paris oo ah xarunta labaad ee ugu weyn Yurub. Nidaamka deegaanka ee bilawga ah ee Berlin ayaa kor u kacayay tan iyo markaas, iyadoo tirada shirkado cusub ay korayaan sanad walba, iyada oo aan laga reebo. Kirada boos xafiis oo yar, iyo fiisaha fudud, ka dhigi soo jiidashada halabuuro badan oo Berlin, in magaalada meel sare laga dhigo 10 xarumaha ugu muhiimsan ee bilowga ah ee adduunka oo dhan.
Magaaladu waxay caan ku tahay goobta kale ee naadiga, xarun faneed gaar ah, si cad, jawiga magaalada iyo kaabayaasha ayaa saldhig weyn u ah bilawga inay kor u kacaan maalin kasta. Waxaa intaa dheer, waxaa jira fursado badan oo ganacsatada si ay kor ugu qaadaan ganacsigooda, hel wareeg kale oo maalgelin ah, oo ay xidhiidh la sameeyaan dhacdooyinka badan ee Berlin ka dhacaya.
Bilowga Ballanqaadka ee Berlin:
Omio, Coachhub, beer-xumo
Mid ka mid ah xarumaha ugu horreeya ee bilawga Yurub, London ayaa lagu qiimeeyay lambarka 1 dhowrkii sano ee la soo dhaafay tirada bilawga firfircoon. London waxay hogaamisaa tignoolajiyada iyo bilawga maaliyadda, with an annual investment record of 8.4 bilyan oo Yuuro 2019.
Halka London ay tahay mid ka mid ah nidaamyada deegaanka ee ugu qaalisan adduunka oo dhan, Aasaasayaal badan oo bilawga ah ayaa doorta waqti ka dib, mahadsanid helida yaabka leh ee maalgelinta. Waxaa intaa dheer, Makhaayadaha London, baararka, dhacdooyinka, waa madal aad u fiican oo lagu abuurayo isku xirka jawi sahlan oo socda.
Bilowga Ballanqaadka ee London:
Si kale loo wareejiyo, Kacdoon, Hopin.
7. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Tel-Aviv
Iyada oo cufnaanta bilowga ugu sareysa ee adduunka, ee 1 bilawga qof kasta 154 dadka deegaanka, Tel-Aviv is one of the top 7 xarumaha bilowga ah ee adduunka oo dhan. Mid ka mid ah sababaha lagu qiimeeyay Tel-Aviv inay tahay xarun bilowga ah, waa in magaaladu ku faantaa shisheeye R&xarumaha D, maskax hal abuur leh, iyo shirkado afaf badan ku hadla.
Sidaa darteed, La yaab maaha in Tel-Aviv ay leedahay wax ka badan 60 bilawga ku taxan NASDAQ. Tel-Aviv ayaa ugu sareysa AI iyo bilawga amniga internetka, kor u qaadid $2.9 Bilyan in 2020 oo keliya. Sidaas, if you are aiming to enter Tel-Aviv’s startup nation, u diyaargarow gorgortan adag oo aad la gasho haweenka iyo ragga ganacsatada ah ee Israel.
Bilowga Ballanqaadka ah ee Tel-Aviv:
Wix, Isniinta, iyo qaar badan oo.
Xarunta ugu dambeysa ee bilawga adduunka waa Silicon Valley. Meesha ugu fiican ee dhulka si aad u dhisato bilawgaada oo aad matoorada u socoto waa Waqooyiga California. Caan ka ah adduunka oo dhan hal-abuurkeeda iyo xarunta tignoolajiyada, San-Fransisco waa abuuraha ugu sarreeya.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee bilowga ah si ay u koraan oo ay u koraan waa xeerar adag oo saaxiibtinimo. In si kale loo dhigo, bilawga ma horumari karo fikradihiisa mooyaane, horumarka, maankana sharci baa ilaaliya. Sayidka, Silicon Valley waxay soo jiidataa maskax badan oo ka kala yimid adduunka oo dhan, waxaana jira ku saabsan 40,000 Xawaaladaha ku salaysan Silicon Valley.
9. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Amsterdam
Liberal, soo dhawayn, oo firfircoon, Jidadka iyo kanaalka Amsterdam waa kuwo aad u kacsan oo dhiirigelin leh. Magaalo furfurnaan ku faana, halabuurnimo, iyo fanka, you will not be surprised to learn that Amsterdam’s startup hub is one of the most booming worldwide. Ranked as the 4th most creative city worldwide, Isweydaarsiga dhijitaalka ah ee Amsterdam ee xasilloon wuxuu soo jiitaa aasaasayaasha bilawga adduunka oo dhan.
Sidaas, haddii aad raadinayso inaad maalgashato, ama fikrado isweydaarsada oo leh maskaxda ugu kheyrka badan, Amsterdam waa inay noqotaa meesha aad u socoto maalgashiga bilowga.
Bilowga Ballanqaadka ee Amsterdam:
Dr., Dyme, Duullimaadka.
Maskaxda shaqada adag ee Shiinaha waxay qayb ka ahayd dabeecadda magaalada iyo awoodda cajiibka ah ee lagu qurxiyo 15 unicorns magaalada. Halka ay maamulka deegaanku caan ku yihiin xeerar adag, Dhacdooyinka bilawga ah sida toddobaadyada bilowga ah iyo Barcamps ee Shanghai waxay abuuraan dhul bacrin ah aasaaska unicorns maxalliga ah.
Waxaa intaa dheer, Suuqa saamiyada Shanghai ayaa si joogto ah uga shaqeynaya soo jiidashada shirkado cusub, iyo kobcinta maalgelinta ballaaran. Laga soo bilaabo barnaamijyada e-commerce ilaa E-Learning, Shirkadda Shanghai’ xuddu waxay ku faantaa wax-ku-oolnimo iyo hal-abuurnimo.
Bilawga Rajada leh ee Shanghai:
Liulishuo, Pinduoduo, Casaan.
10. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Hong Kong
Iyadoo shirar bilow fiican leh, canshuur yar, iyo heerka dulsaarka, Hong Kong waa deegaan deegaan oo aad u kobcaya ee Aasiya. Loo yaqaan magaalada ugu Galbeedka Aasiya, Hong Kong waa casri, oo ay ka buuxaan aragtiyo soo jiidasho leh iyo dhismooyinka dhaadheer, marka cirku waa xadka. Halka Hong Kong ay caan ku tahay cirka sare iyo aragtiyaha mustaqbalka, the startup’s landscape is mostly finance and fintech.
Sayidka, ka mid ah unicorns badan ee magaalada, Waxaad arki doontaa inta badan Fintech unicorns, oo ay la socdaan software $ Xogta. Waxa intaa dheer in la qurxiyo kartida deegaanka, the local co-working spaces in Hong Kong are most welcoming to bright foreign minds. CoCoon, Hive Hong Kong, Shaybaadhka Wanaagsan ayaa ah dhawr ka mid ah meelaha wanaagsan ee wada shaqaynta, ka shaqaynta iskaashiga iyo soo jiidashada aasaasayaasha ka baxsan Aasiya.
Bilowga Ballanqaadka ah ee Hong Kong:
Gatcoin, Lacag kaash ah, IP Nexus.
Asalkii hore ee Xiaomi, Dhismooyinka dhaadheer ee Beijing waa meesha hal-abuurka, farsamada, iyo kartidu waxay ku kulmaan kicinta maskaxda. Naqshadaynta mustaqbalka ee Beijing waa dhiirigelinta xarunta ugu mashquulka badan ee Aasiya. Sidaa darteed, magaalada kaliya waxaa ka badan 30 gisi, founded by the city’s gifted minds.
Waxaa intaa dheer, Beijing ayaa ka mid ah 12 xarumaha ugu sareeya ee bilawga adduunka oo dhan xagga tignoolajiyada gaarka ah iyo horumarka. Tusaale ahaan, Beijings’ nidaamka deegaanka bilawga ah ayaa qani ku ah unicorns oo isku tola barashada qoto dheer iyo barashada mashiinka, oo ay la socdaan sirdoonka macmal.
Bilowga Ballanqaadka ah ee Beijing:
WeChat, Baydu, ByteDance.
12. Xarumaha Bilowga ugu Sareeya Adduunka oo dhan: Munich
Haysashada mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 3 muuqaalada bilawga ah ee si fiican ugu xidhan, Munich waxay leedahay nidaam deegaan bilow fiican leh. Intaa waxaa dheer in ay tahay meel fantastik ah samaynta isku xirka iyo abuurista fursado taageero, Munich waxay leedahay celcelis ahaan 290% investment growth annually.
Sidaas awgeed, Munich waxay leedahay mid ka mid ah tirada ugu badan ee bilawga adduunka oo dhan, shaqo furan oo kala duwan, and the top startups in Europe.
halkan at Save A tareenka, Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaagno Top 12 Startup Hubs Adduunka oo dhan.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "top 12 Startup Hubs Adduunka oo dhan”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Ftop-startup-hubs-worldwide%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Jidka Beer – Qamri Best In Europe By tareenka